May | 2015 | linyeikhtin
This entry was posted in ကဗျာ on May 26, 2015 by linyeikhtin.
“လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဆို တယ်ပြောကြတယ်ဗျ။ ခေါင်းပေါ်မှာ အပူအပင်တွေတင်ပြီး တစ်သက်လုံးနေရတယ် ဘာညာပေါ့။”
ကုန်ခါနီးဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်က သူ့ခေါင်းထက်ကမီးစကို လှုပ်တုတ်တုတ်လုပ်ရင်း ရင် ဖွင့်ရှာသည်။
“အမှန်ဆို ကျွန်တော်တို့ကမှ တော်သေးတယ်ဗျ။ ဒီတစ်ခုကိုတော့ လူတွေမသိကြဘူး။”
သူကတော့ သိပ်မထူးခြားဟန်နှင့် သူ့စကားကိုဆက်သည်။
“ကြည့်ကြည့်လေ။ ကျွန်တော်တို့က အပူတွေခေါင်းပေါ်တင်ရတယ်ဆိုဦး နာရီပိုင်းသာသာ လောက်ရယ်။
ရုတ်တရက် ဖယောင်းတိုင်က မီးအိမ်ကြီးဆီမေးငေါ့ပြသည်။
“သူတို့ခမျာ လနဲ့နှစ်နဲ့ချီအောင် အပူတွေကို ရင်ဘတ်ထဲထည့်ထားကြရရှာတာ။ သူတို့ ထက်စာရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က တော်သေးတာပေါ့။”
ထို့နောက် ဖယောင်းတိုင်၏စကားသံတို့ တဖြည်းဖြည်းတိတ်ဆိတ်သွား၏။
ဒီအတိုင်းသာဆို မီးအိမ်ကြီးကို ခဏခဏရေပတ်တိုက်ပေးရတော့မည်။
This entry was posted in အတွေးစာစုများ(ရသ) on May 23, 2015 by linyeikhtin.
ဒီကိစ္စကို ငှက်ရိုးလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်တော့။ ထို့ကြောင့် လက်နောက်ပစ်ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဒီလိုနည်းနဲ့မှမကြည့်လဲ ဘယ်လိုမှကြည့်ရမည်မဟုတ်သဖြင့် မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ တော့ ကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည်။
လူတွေဆိုတာကလည်းလူတွေ တစ်စိတ်ကိုတစ်အိတ်လုပ်လွန်းကြသည်။ ထိုထိုလူတွေထဲ ဘူမိဗေဒသမားတွေက အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။
ဟိုးတလောကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ဖတ်လိုက်ရသည်။ ရန်ကုန်မြို့သည် မြေအောက်ရေ သုံးစွဲမှုအလွန်များသောကြောင့် မြို့ကြီးကတစ်နှစ်လျှင် မီလီမီတာအနည်းငယ်စီ နိမ့်ကျလာသည်ဟု ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စကထား။
အခုတစ်ခါလာပြန်ချေပြီ။ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးနှင့် ဒဂုံစီးတီးကိစ္စ။
ဟိုကသူ့ဖာသာသူကွန်ဒိုဆောက်သည်။ ဒါကို ထိုဘူမိဗေဒသမားတွေက သုံးသပ်ချက်တစ် ခု ထုတ်ပြန်လိုက်ကြသည်။ ဒဂုံစီးတီးသည် သိဂုင်္တ္တရကုန်းလက်တက်များပေါ်တွင်တည်ရှိနေကြောင်း၊ ထိုဒဂုံစီးတီးအဆောက်အဦးများအတွက် မြေတူးသည့်အခါ သိဂုင်္တ္တရကုန်းအောက်ရှိ မြေအောက်ရေ ကြောကို ထိခိုက်စေပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်လာနိုင်ခြေရှိကြောင်းများဖြစ်သည်။
ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြားတော့ လူတွေအတော်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း ဖွ ဘုတ်ကြီးပေါ်တွင် ပို့စ်များပလူပြန်လာကြသည်။ ရဲရဲတောက်သမားတွေ အလျှိုအလျှိုပေါ်လာကြသည်။ အဆဲဝါသနာပါသူတို့ကတော့ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တုံဏှိဘာဝေလုပ်နေသည့် မဘသကိုဆဲကြ သည်။
အစပထမတုန်းကတော့ နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးအတွက် ဖက်စုံထောင့်စုံမှ စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသော အစိုးရအရာရှိမင်းများက သည်းခံကြသေးသည်။ သို့သော် “အမှိုက်ကစ ပြ ဿဒ်မီးလောင်”နိုင်သဖြင့် အမှိုက်တွင်တောင်မစွဲသေးသည့်မီးကို တက်ညီလက်ညီဝိုင်းငြှိမ်းသတ်လိုက် ကြသည်။ “ထိုဒဂုံစီးတီးနှင့်ပတ်သက်၍ မကောင်းကြောင်းရေးသူများကို ထိရောက်စွာအရေးယူမည်” ဟူသတတ်။
ငှက်ရိုးကတော့ ထိုသို့အရေးယူသင့်သည်ဟုထင်သည်။ ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားလျှင် ဆိုးချေ မည်။ အစိုးရအဖွဲ့မှလည်း (သူတို့အခေါ်) နားလည်တတ်ကျွမ်းသည့် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အသေအချာ စစ်ဆေးပြီးသားဟုဆိုကြသည်။ ဘယ်လောက်တတ်ကျွမ်းသည့် အင်ဂျင်နီယာနှင့်စစ်သည်။ ဘယ်လို နည်းပညာနှင့်စစ်သည်။ ဘယ်အချိန်ကစစ်သည်။ ဒါတွေမသိရတာလေးပဲရှိသည်။
တစ်ကယ်တမ်းဆို ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ၄င်းတို့၏အပြုအမူများကိုကြည့်ရုံနှင့် သူတို့ဘာ မှမပြောခင်ကတည်းကကို ယုံကြည်စွာခေါင်းညှိတ်ထားသင့်သည်။ ဒီလိုဆို အရေးယူမည့်ကြေညာချက် မျိုးလည်း ထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပေ။ တစ်ကယ့်တစ်ကယ်အပြစ်ရှိသူများမှာ အရေးယူမည် ဟု ကြေညာသည့် အစိုးရအရာရှိများမဟုတ်။ သုံးသပ်ချက်ထုတ်သည့် ဘူမိဗေဒသမားများဖြစ်သည်။
တစ်ချို့သူများကလည်း ထိုကွန်ဒိုများကို လုံးဝကိုမဝယ်ရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြသည်ဟု ငှက်ရိုးကြားရသည်။ အဆိုးဆုံးကတော့ အိမ်ထောင်သည်များဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရင်းကိုမေးကြည့် တော့ စိတ်မလုံလို့ဟုပြန်ဖြေကြသည်။
သူတို့ဘာတွေစိတ်မလုံသည်တော့ငှက်ရိုးမသိ။ ငှက်ရိုးသိသည်က ထိုအထပ်မြင့်ကွန်ဒို တွေပ်ါလာလျှင် ငှက်ရိုးကတော့ဝမ်းသာမိလိမ့်မည်။
ယခင်ကဆို ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးချင်လျှင် ကားစီးမှရောက်သည်။ ယခုတော့ဒီလိုမဟုတ် ကွန်ဒိုတစ်ခန်းဝယ်ထားရုံနှင့် ဘုရားကိုနေ့နေ့ညညဖူးနိုင်သည်။
ယခင်ကဆို ငှက်ရိုးတို့ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှနေ၍သာ ဘုရားကိုမော်ဖူးဖူးသည်။ ထိုကွန်ဒိုများ သာပေါ်လာလျှင် ရွှေတိဂုံဘုရားကို ငုံ့ကြည့်ပြီးလည်းဖူးနိုင်သည်။
နေ့နေ့ညညဖူးနိုင်သည်။ ရှုထောင့်အစုံစုံမှဖူးနိုင်သည်။ ယခင်ကလို ကားစီးစရာမလိုသဖြင့် မီးပွိုင့်မိခြင်းဒုက္ခမှလည်း ကင်းဝေးလေသည်။
ထို့ကြောင့် ငှက်ရိုးအိမ်ကလူကြီးများကို ကွန်ဒိုတစ်ခန်းဝယ်ပေးရန် အပူကပ်ရမည်။ ထိုဒဂုံ စီးတီး မြန်မြန်ဆောက်ပြီးရန်လည်း ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးဆီသွားပြီး ညတိုင်းဆုတောင်းရမည်။ ပြိုမကျ ရန်လည်း ယတြာချေသင့်ချေရမည်။ (ဤသည်မှာ ဒဂုံစီးတီးရှိကွန်ဒိုများကိုသာ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။) ထို့အပြင် ဘူမိဗေဒသမားတို့ ထုတ်ပြန်သောအချက်များ မှားပါစေရန်ကိုလည်း အလေးအနက်ထားကာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များအား ကန်တော့ပွဲထိုး၍တိုင်တည်ရမည်။
This entry was posted in ဟာသ on May 19, 2015 by linyeikhtin.
This entry was posted in ကဗျာ on May 16, 2015 by linyeikhtin.
This entry was posted in ပြခန်း on May 15, 2015 by linyeikhtin.
“ငါ မင်းအနောက်မလိုက်ချင်တော့ဘူးကွာ ငါ့ကိုထားခဲ့ပြီးသွားပါတော့”
အနောက်ဆုံးက”သုည”က ရှေ့ဆုံးက”တစ်”ကို လှမ်းပြောလိုက်သည်။
အလယ်ကသုညကတော့ တစ်ကိုတစ်လှည့်ကြည့် သူ့သူငယ်ချင်းသုညကိုတစ်လှည့်ကြည့် နှင့် စိတ်အတော်အိုက်နေပုံရသည်။
ဘယ်လိုပင်တားတား တား၍မရတော့သဖြင့် နောက်ဆုံးက”သုည”ကို တွဲဆက်ဖြုတ်ပစ် လိုက်ပြီး သူတို့ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။
ရက်ကိုလစား၊ လကိုနှစ်စားဖြင့် အချိန်တွေကြာမြင့်လာခဲ့သည်။
တစ်နေ့…။ထိုလမ်းခွဲလေးသို့ သူတို့နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ရောက်လာခဲ့၏။ သူတို့နောက်ပါး တွင်တော့ “သုည” အသစ်တစ်လုံးနှင့်………။
“ဟိုးရှေ့မှာ သုညတစ်လုံးပါလား။ အဲဒီနေရာမှာရှိခဲ့တာ အတော်ကြာပြီထင်တယ်။ ရေညှိ တွေတောင် တက်နေပြီ။”
ထိုမြင်ကွင်းကိုတွေ့တော့ အဖြစ်မပျက်အလုံးစုံကိုသိထားသည့် အလယ်သုညက တစ်ကို လှမ်းမေးသည်။
“တို့တွေသူ့ကိုပြန်လက်ခံကြမလား။ သူ့ကြည့်ရတာ အတော်ကိုနောင်တရနေပုံပဲ။”
သို့သော်…။ ရှေ့ဆုံးက”တစ်”ကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားပင် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
“ဟေ့အေး…ငါတို့က၁၀၀ပြည့်နေပြီလေ။ သံယောဇဉ်ဆိုတာနဲ့သာ သူ့ကိုပြန်လက်ခံမယ်ဆို နောက်ဆုံးက”သုညအသစ်”ကို ရက်ရက်စက်စက် ချန်ထားရစ်ခဲ့မှပဲရလိမ့်မယ်။ ထားလိုက်ပါတော့…။ အားလုံးက လွန်ခဲ့ပြီးပြီပဲဟာ။”
ရေညှိတို့ကပ်နေသည့် သုညကတော့ သူတို့ကိုမှုန်ရီဝေးသီစွာကြည့်ရင်း တဖြည်းဖြည်း ကျန်ခဲ့သည်။
This entry was posted in အတွေးစာစုများ(ရသ) on May 12, 2015 by linyeikhtin.
အမှန်အတိုင်းပြောပြရရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝက အဲဒီအိမ်လေးကနေပဲ စခဲ့ကြတယ်ပေါ့။
ကျွန်တော်တို့အခေါ်အဝေါ်အရသာ “အိမ်”။ လူတွေခေါ်တာတော့ “အသိုက်”။
ဘာပဲပြောပြောပါ။ သူတို့အဲဒီလိုခေါ်တာလဲ မှားတယ်ရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့အတွက်သာ အိမ်ဖြစ်နေတာ သူတို့အတွက်တော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်တဲ့ သတ္တဝါတွေရဲ့ တည်ရာဖွားရာလို့ သတ်မှတ်မှာပေါ့လေ။
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေတာ အတော်ကြာပြီဗျ။ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်လို့တောင်ဆိုရမယ်။
အဘိုးရဲ့အဖေ “အဘေး”လက်ထက်ကတည်းက နေလာကြတာဆိုတော့ အချိန်ကဘယ် နည်းတော့မလဲ။
သူတို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့”ကြွက်”တွေမြင်တာနဲ့ ရရာလက်နက်ကိုင်ပြီးလိုက်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကကြွက်တွေပဲဟာ။ ချောင်ကြိုချောင်ကြားဝင်ပုန်းရင်း နောက်ဆုံးတော့လည်း မျက်ခြေပြတ်သွားကြတာပါပဲ။
ဒီလိုမျိုး နေ့တိုင်းကျီးလန့်စာစားဘဝနဲ့နေနေရတာ စိတ်မပျက်ဘူးလားလို့ တော်တော်များ များက လာမေးကြတယ်။
အဲဒီလိုလာမေးကြတိုင်း ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခွန်းပဲပြန်ဖြေဖြစ်ပါတယ်။ “ဒီလိုနည်းနဲ့မှ အသက်မရှင်ရင်လည်း တို့တွေမှာ တခြားအသက်ရှင်စရာနည်းလမ်းမှမရှိတာ။”
လူတွေဆိုတာလည်းလူတွေ။ သူတို့ဖမ်းလို့မရတော့ တခြားနည်းတွေသုံးတယ်ဗျ။
ကြွက်ထောင်ချောက်နဲ့ဖမ်းလား ဖမ်းရဲ့။ ကြွက်သတ်ဆေးတွေနဲ့ဖမ်လား ဖမ်းရဲ့။ နည်းကို စုံနေတာပါပဲ။
ပထမတုန်းကတော့ ခံရသေးတယ်ဗျ။ ကြာလာတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း အထာနပ်သွား ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကြွက်ထောက်ချောက်တို့၊ ကြွက်သတ်ဆေးတို့ကို ကြောက်မိသေးတယ်။ ခုတော့လည်း ကြောက်တာဆိုလို့ မဟာရန်သူတော်ဖြစ်တဲ့ ကြောင်ပဲရှိပါတော့တယ်။
သြော်…ကြောင်ဆိုမှ ဟာသတစ်ခု သတိရတယ်။
တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်တွေရယ်လေ ကျွန်တော်တို့ကိုမနိုင်လို့ ကြောင် တစ်ကောင်ခေါ်မွေးလာတယ်။ အဲဒီကြောင်ရောက်လာမှပဲ သူတို့ခမျာ ငါးပါးမက၊ ဆယ်ပါးပါ မှောက်ပါ လေရောဗျာ။
တစ်ကယ်ပါ။ အရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ဖွတယ်ဆိုတာ နည်းနည်း။ အဲဒီကြောင်ရောက် ပြီးမှ တစ်အိမ်လုံးမှာ လူရော၊ကြွက်ရော လုံးဝကိုငြိမ်ငြိမ်မနေရဘူး။
ဟင်းတွေခိုးစားပြန်ပြီ။ အိပ်ယာကိုသေးပန်းသွားပြန်ပြီ။ မှန်တွေကွဲပြန်ပြီ။ ဒီစကားသုံးခွန်း က တစ်နေ့ကိုတစ်လှည့်စီ ကြားနေရတဲ့စကားတွေပါ။ လူတွေလည်း “ကြွက်ကြောက်လို့ကြောင်ကြီးကိုး ကြောင်ကြီးကြွက်ထက်ဆိုး”သလိုကို ဖြစ်သွားရောဗျာ။
နောက်တော့အိမ်ကလူတွေလည်း ဒဏ်မခံနိုင်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့။ အဲဒီကြောင်…သူများဆီ ရောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီအိမ်မှာနေလာတာ အတော်ကြာပါပြီ။ နေ့တိုင်းလိုလို လူတွေနဲ့လိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားရတာလဲ ပျော်နေပါပြီ။ ပြောရရင်သံယောဇဉ်ဖြစ်နေ ပြီလို့တောင် ပြောရမလားမသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပြဿနာတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ပြဿနာကလည်း အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးနဲ့ လုံးဝကိုသက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ဖြာကျနေတဲ့လရောင်ကိုငေးရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကားဝိုင်းက တိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။
“မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆုံးဖြတ်တော့။ ဆန်အိုးထဲမှာ အရင်ကလိုဆန်တွေ မရှိတော့တာ မင်းလဲအသိ၊ ငါတို့လဲအသိပဲ။ တို့စုထားတာလေးတွေကုန်တာလဲ ၂ရက်ရှိသွားပြီ။ အားလုံးဗိုက်ဆာနေ ကြပြီ။ ဒီအချိန်မှာ မင်းကအခရာပဲ။ မင်းတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်ပါတော့သူငယ်ချင်းရယ်”
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကစားဖော်ကစားဖက် သူငယ်ချင်းက လောဆော်လိုက်တယ်။
သူငယ်ချင်းပြောမှ သတိထားမိတယ်။ အားလုံးက အစာပြတ်လတ်နေတာမို့ အတော့်ကို ညှိုးနွမ်းနေကြတယ်။
အို…ဟုတ်ပါရဲ့။ ငါ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေ။ နောက်တော့ ငါ့ရဲ့ချစ်ဇနီး။ ရင်ခွင်ထဲက သားငယ်…။ နောက်တော့ငါ့ကိုယုံကြည်သူတွေ။ အားလုံးက မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့ ငါ့အဆုံးအဖြတ်ကို ငံ့လင့်နေကြ ပါလား။
ငါ့……ငါ့ရဲ့ တွေဝေမှုက သူတို့ကိုဒုက္ခတွင်းထဲ တွန်းပို့နေသလိုပါပဲလား။ ဒီအချိန်မှာ သံယောဇဉ်ဆိုတာတွေက အသုံးဝင်ပါ့မလား။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ချက်ငဲ့ကြည့်ရင်း ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ခဲယဉ်းစွာချလိုက်သည်။
ဒီစကားသံကို ကြားလိုက်ရတဲ့ခဏ သူတို့တွေရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဆိုတာ မျက်နှာထက်မှာ တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေပါတယ်။ ဝမ်းသာလို့ဟစ်ကြွေးတဲ့ အသံတွေကတော့ ဆူဆူညံလို့ပေါ့။
မှာကြားစရာရှိတာတွေကို မှာကြားအပြီးမှာတော့ တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပဲ အိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့အိပ်ခန်း ဆီ တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။
အိပ်ခန်းတံခါးကိုတွန်းဖွင့်ရင်း မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲ နှုတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုချစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုတွယ်တာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတတ် နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမို့ ကျွန်တော်ထွက်သွားရတော့မယ်။
အရင်လိုပြေးတမ်းလိုက်တမ်းမကစားရတော့လို့ ခင်ဗျားပျင်းနေမလား ကျွန်တော်မသိဘူး။ အရှုပ်ထုပ်လေးတွေမရှိတော့လို့ ခင်ဗျားပျော်နေမလား ကျွန်တော်မသိဘူး။ ကျွန်တော့်လိုပဲ ကျွန်တော့် ကို လွမ်းနေမလားဆိုတာလဲ ကျွန်တော်မသိဘူး။
သံယောဇဉ်မပြတ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမယ့်အသက်ရှင်ဖို့ထက်တော့ အရေးမကြီးဘူးမဟုတ် လား။
တစ်နေ့………။ ဒီအိမ်ရဲ့ဆန်အိုးထဲမှာ ဆန်တွေပြည့်တဲ့တစ်နေ့။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လာခဲ့ပါ့ မယ်။”
မျက်ရည်များစွာ တတွေတွေစီးကျရင်း အိပ်ခန်းကိုကျောခိုင်းပြီး လှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်လာခဲ့တာကိုသူသိမယ်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကိုလည်း သူကြားမယ် မထင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူအိပ်ပျော်နေတယ်လေ။